Vilks oo isku diyaarinaya aflagaadada nabiga (scw) | Somaliska
Ninka Swedishka ah ee lagu magacaabo Lars Vilks ee aflagaadeeyay nabi Muxamed (scw) dhowr jeer ayaa marti qaad ka helay jaamacada Uppsala si uu u dhamaystiro hadal aflagaado ah ee uu ka jeediyay jaamacada dhowr bilood ka hor ka dibna uu weerar ku qaaday wiil yar oo 16 sano jir ah. Wiilka ayaa ku booday Vilks ka dib markii uu soo bandhigay filin ay ka muuqdaan rag khaniisiin ah oo uu ku aflagaadeenayay rasuulka (scw). Hadaba jaamacada ayaa sheegtay in aan la aqbali karin in khalalaaso laga sameeyo hadal uu qof ka jeedinayay jaamacada aflagaado kastaba ha ahaadee, ayna muhiim tahay in la dhowro waxa ay ugu yeeraan xoriyada hadalka ayagoo sheegay si ay u dhowraan xoriyada hadalka iyo dimoqraadiyada in ay marti qaad u fidiyeen Vilks. Si kastaba ha ahaatee, Vilks ayaa ka balansan jaamacada Uppsala 7da Bisha Oktoobar in uu sii wato aflagaadadiisa, ayadoo dhagaysiga hadalkiisa uu u furan yahay dadwaynaha. Ninkaan ayaa hawada soo galay markii uu soo bandhigay kartoono qof Eey loo ekeysiisay oo uu ku aflagaadaynayay Nabi Muxamed (scw).
Ninka Swedishka ah ee lagu magacaabo Lars Vilks ee aflagaadeeyay nabi Muxamed (scw) dhowr jeer ayaa marti qaad ka helay jaamacada Uppsala si uu u dhamaystiro hadal aflagaado ah ee uu ka jeediyay jaamacada dhowr bilood ka hor ka dibna uu weerar ku qaaday wiil yar oo 16 sano jir ah.
Wiilka ayaa ku booday Vilks ka dib markii uu soo bandhigay filin ay ka muuqdaan rag khaniisiin ah oo uu ku aflagaadeenayay rasuulka (scw).
Hadaba jaamacada ayaa sheegtay in aan la aqbali karin in khalalaaso laga sameeyo hadal uu qof ka jeedinayay jaamacada aflagaado kastaba ha ahaadee, ayna muhiim tahay in la dhowro waxa ay ugu yeeraan xoriyada hadalka ayagoo sheegay si ay u dhowraan xoriyada hadalka iyo dimoqraadiyada in ay marti qaad u fidiyeen Vilks.
Si kastaba ha ahaatee, Vilks ayaa ka balansan jaamacada Uppsala 7da Bisha Oktoobar in uu sii wato aflagaadadiisa, ayadoo dhagaysiga hadalkiisa uu u furan yahay dadwaynaha.
Ninkaan ayaa hawada soo galay markii uu soo bandhigay kartoono qof Eey loo ekeysiisay oo uu ku aflagaadaynayay Nabi Muxamed (scw).